बजेट होस् लगानीमैत्री- विचार - कान्तिपुर समाचार
जेष्ठ १३, २०७९ चन्द्र ढकाल
अर्थ मन्त्रालय आर्थिक वर्ष २०७९–८० का लागि बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । मुलुकको आर्थिक विकास तथा समृद्धिको दिशानिर्देश गर्ने बजेट तथा कार्यक्रममा आम नागरिकको चासो रहने गर्छ । मुलुक लामो समय विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनबाट गुज्रिएका कारण आर्थिक विकास र समृद्धिमा निकै पछि परेको छ ।
यसका साथै भूकम्प तथा कोभिडको महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पारेको छ । अहिले, हाम्रो अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र दबाबमा रहेको छ । निर्यातका तुलनामा आयातमा आएको वृद्धि तथा विदेशी मुद्रा आर्जनका प्रमुख स्रोतहरू पर्यटन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र रेमिट्यान्समा आएको शिथिलताका कारण यो समस्या देखिएको हो ।
आगामी बजेट कोभिड महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिँदै सबै नेपालीका विकास, समृद्धि र समुन्नतिका आकांक्षाहरू पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ । यसका साथै, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाबलाई दीर्घकालका लागि सम्बोधन गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न आगामी बजेटले विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ । निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण सृजना गर्न तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी व्यावसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवम् कानुनी सुधारतर्फ पनि आगामी बजेटले जोड दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले, नयाँ बजेट विशेष र रूपान्तरणकारी हुनुपर्छ । तब मात्र यसले सबै नेपालीका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्छ ।
अर्थतन्त्रको अबको बाटो
मुलुकको अर्थतन्त्र कोरोना महामारीका कारण क्षत–विक्षत छ । लकडाउनका कारण धेरैजसो उद्योग, कलकारखाना तथा व्यवसायहरू लामो समय बन्द रहे । उद्योग बन्द हुँदा उत्पादन, सेवा तथा प्रशोधनमा काम गर्ने धेरै जनाले रोजगारी गुमाएका छन् । यसबाट एकातर्फ उद्योगी–व्यवसायीहरूले गरेको लगानी जोखिमका परेको छ भने, अर्कातर्फ ती व्यवसायमा आबद्ध श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउँदा उनीहरूमाथि आश्रित लाखौं परिवार आर्थिक समस्यामा परेका छन् ।
आगामी बजेटले महामारीपछिको अवस्थामा आगामी अर्थतन्त्रको दिशानिर्देश गर्दै कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याई यी सबै समस्याको यथोचित सम्बोधन गर्न उत्तिकै जरुरी छ । अर्थतन्त्रको समसामयिक समस्याको मूल कारण आयात–निर्यातबीचको अन्तर हो । यसले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको छ । आगामी बजेटले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिन जरुरी छ । निर्यातलाई थप प्रोत्साहन गर्न भन्सार दरबारे पनि समीक्षा गर्न सकिन्छ । आन्तरिक उत्पादन बढाउन नसक्नु नै व्यापार घाटाको मुख्य कारण र यही वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, तरलता संकटजस्ता समस्याको जननी भएकाले त्यसका लागि सरकारले कहाँ कसरी कुन वस्तु उत्पादन गर्ने, कुन वस्तु आयात र कुन निर्यात गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना बनाउनुपर्छ ।
कुनै पनि मुलुकको विकास, समृद्धि र समुन्नतिका लागि भौतिक तथा अन्य पूर्वाधारको विकास सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हो । अर्थतन्त्रलाई आपूर्ति शृंखलामा जोड्न र वस्तुको पारवहन तथा सेवाको वितरणका लागि पनि भरपर्दो र गुणस्तरीय पूर्वाधार आवश्यक पर्छ । मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि पूर्वाधारको विकास जरुरी हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा पनि ठूला तथा ‘गेम चेन्जर’ पूर्वाधारहरूमा लगानी जुटाउन सरकारले विशेष वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ । ठूला र फराकिला सडक, जलविद्युत् आयोजना, ड्राइपोर्ट, एयरपोर्ट, केबलकार तथा पर्यटकीय होटलमा स्वदेशी–विदेशी लगानी आकर्षण गर्न उपुयुक्त वातावरण बनाई विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउन आवश्यक छ ।
ठूला आयोजना र पूर्वाधारमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको जग्गाप्राप्तिको विषयलाई समाधान गर्न सरकारले यस्ता पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने जग्गा निश्चित समयावधिका लागि न्यूनतम मूल्यमा उपभोग गर्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी भित्र्याउन पनि सहयोगी भूमिका खेल्छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता महत्त्वपूर्ण छ । निजी क्षेत्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो र यसले सृजना गरेको रोजगारी, यस क्षेत्रबाट संकलन हुने कर तथा राजस्वले अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि निजी क्षेत्रको योगदान ८० प्रतिशत हाराहारी छ । करिब ७५ प्रतिशत रोजगारी निजी क्षेत्रले नै दिइरहेको छ । तसर्थ, राज्य र निजी क्षेत्रबीच अर्थपूर्ण साझेदारी आजको मुख्य आवश्यकता देखिन्छ । कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन र नेपाललाई सन् २०२६ भित्र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न यसको झन् बढी महत्त्व छ ।
वार्षिक लाखौं नयाँ रोजगारी सृजना गर्ने, राज्य सञ्चालनको मुख्य स्रोत कर तथा राजस्व संकलन गर्ने, आन्तरिक पुँजी निर्माण गर्ने, दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र समतामूलक तथा समावेशी विकास गर्दै मुलुकलाई समृद्ध र समुन्नत बनाउने राज्यको अभियानमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्न सके मात्र हामीले अपेक्षा गरेको द्रुत विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव हुन्छ । यसका लागि राज्यले निजी क्षेत्रलाई लगानीको उपयुक्त वातावरण बनाइदिए पुग्छ । निजी क्षेत्रका लागि व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गरी सहजीकरण र प्रोत्साहित मात्र गरिदिए पुग्छ ।
सरकारी स्वामित्वमा रहेका रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्ने वा निजीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रप्रतिको नकारात्मक ‘कोनोटेसन’ लाई मेटाउँदै निजी क्षेत्र सम्मानित र जिम्मेवार क्षेत्र हो भन्ने विश्वासलाई बढाउँदै लैजान तदनुरूपका कार्यक्रमहरू ल्याउन जरुरी छ । उद्योग, पर्यटन, कृषि, जलविद्युत्जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिने एवं निजी क्षेत्रको सहभागिता र साझेदारीमा कृषिको व्यवसायीकरण तथा यान्त्रिकीकरणका लागि विशेष कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।
मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न नीतिगत एवम् कानुनी सुधार अर्को महत्त्वपूर्ण आवश्यकता हो । पुराना तथा दोधारे कानुनी जटिलताका कारण पनि मुलुकमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक पुँजी निर्माणलाई महत्त्व दिइएको छैन । निजी क्षेत्रलाई कर तथा राजस्वको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने गरेको पाइन्छ । उत्पादनमूलक उद्योग तथा ट्रेडिङबीचको अन्तर खुट्याइएको छैन, जसले गर्दा निजी क्षेत्र उद्योगमा थप लगानीका लागि उत्साहित हुने वातावरण बन्न सकेको छैन ।
राजस्व संकलनमा सोचे अनुरूपको सुधार भए पनि सरकारी खर्च प्रणालीमा सुधार हुन सकेको छैन । अहिले यो प्रवृत्ति बिस्तारै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सरेको छ । आर्थिक वर्षका अन्तिम दुई महिनामा झन्डै ४०–५० प्रतिशतसम्म पुँजीगत खर्च हुने अवस्था छ । यसरी सरकारी ढुकुटीमा लामो समय पैसा थन्किएर बस्दा एकातर्फ मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा कमी आई अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारमा प्रत्यक्ष घाटा भएको छ भने, अर्कातर्फ लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा यसले असर गरेको छ ।
त्यसैले आगामी बजेट सम्पूर्ण सुधारसहितको बजेट बन्नुपर्ने सबैको अपेक्षाको छ । अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान तथा विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाउने गरी, निजी लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने गरी, र मुलुकको अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी बजेट बन्नुपर्छ । बजेट निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री हुनुपर्छ ।
-ढकाल नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् ।
यस पटक मतपेटिकाका माध्यमबाट प्रकट भएको युवा भावना दलहरूप्रतिको आक्रोश र उत्तेजना मात्र होइन, मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो, युवा भविष्य र मुलुकको मुहार फेर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर पनि हो ।
क्रान्ति बन्दुकको नालबाट मात्र होइन, लौरोबाट पनि सम्भव छ, युवाका लागि यो अभियान उत्प्रेरक छ । विद्यमान राजनीतिको फोहोरी भेलमा देखिएको विश्वासको त्यान्द्रो पनि हो यो ।
जेष्ठ १३, २०७९ राजेन्द्रसिंह भण्डारी
‘बालेन’ शब्द युवा जनजिब्रोमा एकाएक आएको होइन, न त फगत व्यक्तिविशेषको पहिचान हो । यो त, युवा भावना र सम्भावनाको सशक्त दाबी र आह्वान पनि हो, जो राजनीतिको शान्त तर फोहोरी तलाउमा तरंग ल्याउन केही हदसम्म सफल हुन सकेको छ । बालेनको लौरो राजनीतिमा रहेका क्षमताविहीन पुराना नेताको दलीय एकाधिकारविरुद्ध सन्देशमूलक प्रहार पनि हो ।
क्रान्ति बन्दुकको नालबाट मात्र होइन, लौरोबाट पनि सम्भव छ, युवाका लागि यो अभियान उत्प्रेरक छ । विद्यमान राजनीतिको फोहोरी भेलमा देखिएको विश्वासको त्यान्द्रो पनि हो यो । युवा विश्वासका प्रतिनिधि पात्र बालेनको सफलता वा असफलताले मुलुकको सिंगो भविष्यलाई कुन मार्गमा डोर्‍याउने भन्ने छिनोफानो पनि गर्नेछ । बालेन एकाएक चामत्कारिक ढंगले प्रकट भएका विलक्षण राजनीतिकर्मी पनि होइनन्, यी त युवाहरूका रोजाइका प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन् । ती युवा जो विश्वविद्यालयको डिग्री भएर पनि जागिरका लागि अयोग्यहरूको सामु भौंतारिरहेका छन् ।
मुलुक कोरोनाले आक्रान्त भएका बेला युवाहरू स्वस्फूर्त समूह ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै बालुवाटारतिर लागे, वास्तवमा यो ‘नकिङ द डोर’ अर्थात् सरकार र राजनीतिक दलको अकर्मण्यताविरुद्ध पहिलो सशक्त शंखनादको चरण थियो । विडम्बना, भोका–निमुखाहरू, श्रम गरेर एक छाक टार्नसम्म धौधौ भएका सर्वसाधारणका लागि टुँडिखेलमा युवाहरूको पहलमा भइरहेको खाना निःशुल्क वितरण कार्यलाई तत्कालीन सरकार र नगरपिताले बन्देज लगाउने उर्दी गरेका थिए । यो उर्दी मात्र थिएन, मानवीय संवेदनाको हत्या गरिएको निर्मम क्षण पनि थियो । त्यति बेला आफ्नै रंगीन दुनियाँमा रमाइरहेका युवा र्‍यापर बालेनलाई कुनै पत्रकारले सोधेका थिए, ‘तपाईं अचेल त मायापिरतीका गीत गाउनुहुन्न नि !’ बालेनले भनेका थिए, ‘मेरो देशका दाजुभाइ, दिदीबहिनी कोरोनाको पीडामा आक्रान्त भएका बेला मायापिरतीका गीत कसरी गाऊँ ?’ उनले बरु पिरती होइन, पीडाका गीतका माध्यमबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन खोजे तर ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को मन्त्रको जग र जपमा टिकेको सरकारले भने कोरोना केही होइन भन्दै ‘बेसार–पानी पिएर, हाच्छ्युँ गरेर भगाउने’ सल्लाह दिइरह्यो । यस्ता बेसारे र बेसुरे सल्लाह नागरिक–बेवास्ताका प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्, जो कोरोनाकालमा कठोर यथार्थका रूपमा प्रकट भए ।
तथ्यांकले सरकार र राजनीतिक दलको भूमिका लोकहितकारीभन्दा बिचौलिया–हितकारी हुन गएको पुष्टि गरिसकेकाले सोही विषयमा थप माथापच्ची गरिरहनु सान्दर्भिक छैन । लोकतन्त्रमा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई होसमा ल्याउने मौका निर्वाचनमा पाइने भएकाले यो पटक प्रकट भएको अभिमतलाई भिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न आवश्यक छ ।
बालेनको लौरो राजनीतिक दलहरूलाई हिर्काउने–थर्काउने गरी उठेको छ । आखिर लौरो दण्डको प्रतीक हो । बालेनको सफलता मतपत्रका माध्यमबाट प्रतीकात्मक रूपमा मात्र प्रकट भए पनि यसले दिएको सन्देश भने राजनीतिक वृत्तमा दीर्घकालीन असर पुर्‍याउने प्रकृतिको छ । कसैको असफलताबाट प्राप्त हुन गएको सफलतालाई बालेन स्वयंले सूत्रबद्ध गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् भन्ने कुराले दलको शुद्धीकरण र पुस्तान्तरणको मुद्दालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउनेछ । यो विशेष गरी युवाको सर्वोपरि हित र परिवर्तनको मुद्दा पनि हो । यसलाई हरेक तहको व्यवहारमा उतार्न एकल बालेनको बुताबाट मात्र सम्भव छैन, परिणाममुखी र परिवर्तनको मुद्दा बनाउन सबै युवाको सक्रिय र सचेत प्रयास आवश्यक रहनेछ । राजनीतिक दलमा लामो समयदेखि मनमौजी ढंगले कब्जा जमाएर बसेका पुराना पुस्ताका नीतिविहीन नेताहरू बालेनको लौरोबाट अझै त्यति भयभीत देखिँदैनन् ।
‘बालेनहरू पानीका फोका हुन् ! विगतमा पनि यसै गरी नानीमैयाँहरू आए, बिलाए ! अन्य मुलुकमा पनि यस्ता पात्रहरू क्षणिक वा लाक्षणिक रूपमा आउँछन्, जान्छन् ! हामी नै राजनीतिका विकल्पहीन पर्याय हौं’ भनेर अझै उनीहरूले खुला चुनौती दिन छाडेका छैनन् । पुराना पुस्ताका नेताहरू जसरी आ–आफ्ना दलमा युवाशक्तिलाई प्रवेशनिषेधको बोर्ड झुन्ड्याएर राजनीति गर्न सफल भएका छन्, त्यसरी नै राजनीतिको खुला राजमार्गमा पनि बालेनलाई लेनमा आउन नदिन हरसम्भव प्रयास गरिरहेका छन् वा गर्ने नै छन् । कुशासन र बिचौलियाको चक्रव्यूहमा फसिसकेका ऊर्जाविहीन नेतृत्वहरूले सहजै बहिर्गमन रोज्लान् भनी अपेक्षा गर्नु पनि निर्थरक छ । तर आफ्नै गाउँठाउँका मतदातासमेतले आफ्नाविरुद्ध लौरो देखाउन थालिसकेकाले उनीहरू केही हदसम्म हच्किन बाध्य भएका छन् । यसरी हच्किएकाहरू झनै सशक्त ढंगले प्रतिवादमा आउने खतरा रहेकाले बालेनको सांकेतिक उपस्थितिलाई सशक्त र परिणाममुखी बनाउन युवाहरूको पहरेदारी, खबरदारी र साझेदारी निरन्तर आवश्यक छ ।
युवा पहरेदारी र साझेदारी कसरी कायम राख्ने ?
युवाहरूमा प्रचुर मात्रामा रहने भावना र ऊर्जा नै विकासका आधारभूत सर्त हुन्, जसलाई एकीकृत र संगठित गर्न निश्चित कार्ययोजना र रणनीति आवश्यक हुन्छ । संघीय राजधानी काठमाडौं, प्रादेशिक राजधानी धनगढी र उपमहानगर धरानसहित अन्य सहरमा, स्वतन्त्र उम्मेदवार नरहेका स्थानमा समेत लौरामा उल्लेख्य मत परेको देखिएको छ, जसले यी सबै वर्ग–क्षेत्रको भावना र सम्भावनालाई कसरी संगठित र सूत्रबद्ध गर्ने भन्ने विषयमा खुला छलफलको माग गरेको छ ।
यसरी यत्रतत्र प्रकट भइरहेको युवा आँटलाई परिवर्तनको आशाका रूपमा कसरी उपयोग गर्ने भन्नेमा युवा चिन्तन र सक्रियता झनै सशक्त रूपमा अघि बढाउन जरुरी छ । वास्तवमा, बालेन युवा शक्तिको भावना र ऊर्जासँग जोडिएका पात्र हुन् । उनले युवा भावनालाई सम्भावनामा परिणत गर्न तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अठोटसमेत गरेका छन् ।
बालेनले मोनो रेल, मेट्रो रेलका ठूला कुरा गरेका छैनन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहोर व्यवस्थापनजस्ता आम सरोकारका मुद्दामा ध्यान दिने प्रतिबद्धता गरेका छन् । फोहोर व्यवस्थापन गर्नु कुनै महाभारत होइन तर योसँगै जोडिएको राजनीतिको फोहोरी खेल उन्मूलनका लागि युवाशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हो । घरघरमै गएर दर्ताको सुविधा दिने, कर संकलन गर्ने, नक्सापास गरिदिनेजस्ता सामान्य प्रकृतिका तर सर्वसाधारणको दैनिकीसँग जोडिएका प्रतिबद्धताले बालेन आम नागरिकको असुविधाप्रति सचेत रहेको पुष्टि गर्छन् । यसले आम नागरिकसँगको भावनात्मक सम्बन्ध र स्वामित्वलाई स्थापित गर्ने नै छ तर यसको सुसञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई कसरी विकास र व्यवस्थित गर्ने भन्ने पक्ष उत्तिकै चुनौतीपूर्ण छ ।
बालेनले प्रतिकूल र अवरोधमुखी राजनीतिक संयन्त्रभित्र रहेर सेवामुखी राजनीतिक निर्णयहरू गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ आम नागरिकको बृहत् स्वामित्वलाई उपयोग गर्न सातामा कम्तीमा दुई पटक ‘आम नागरिकसँग मेयर’ जस्ता कार्यक्रमलाई खुलामञ्चमै सञ्चालन गरी ‘पब्लिक अडिटिङ’ को मोडललाई मुख्य संयन्त्रका रूपमा उपयोग गर्न आवश्यक छ । यसका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्पदा लगायतका क्षेत्रका विज्ञहरूको समूहलाई आधिकारिक बोर्डका रूपमा गठन गरी उनीहरूको विज्ञतालाई उपयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्नेछ । यसरी विज्ञताको सेवा दिने व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क सेवाका लागि आह्वान गर्ने र हरेक निर्णयलाई पारदर्शी बनाउने कार्यनीतिलाई कार्यविधिमै समावेश गर्ने रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।
अघिल्ला मेयरको पहिलो निर्णय नै आफ्नै सुविधाका लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने रहेको थियो । यस पटकको पहिलो निर्णय युवा रोजगार र सहभागिताका लागि के गर्ने भन्ने योजनाबाट हुनुपर्छ । यसरी कार्य आरम्भ गरे बालेनले जनमतको सम्मान गरेको ठहर्नेछ । यसबाहेक अन्य कैयन् विषयमा अन्यत्रका सफल अभ्यासलाई अनुसरण गर्न सकिन्छ । यस क्रममा भक्तपुरको जनसहभागितामूलक विकासको रणनीति अनुकरणीय हुन सक्छ । जनमतका माध्यमबाट प्रकट हुन गएको युवा सोचलाई उपयुक्त संयन्त्र र वैज्ञानिक शैलीका माध्यमबाट सञ्चालन र सन्तुलनमा कसरी ‘र्‍याप र ट्र्याप’ गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती बालेनको काँधमा छ । युवा–हुँकारले पुरानो सोच र प्रवृत्तिलाई ट्र्याप अर्थात् जालमा पार्न खोजेको देखिन्छ ।
‘बल्ल पर्‍यो माकुरी जालैमा’ भनेजस्तै सहरी क्षेत्रका चेतनशील युवाहरूले पुरानालाई जालमा फसाएर पौराणिक बनाउने भरमग्दुर प्रयास गरिरहेका छन् तर यो जाल माकुरीको मात्र भयो भने यसमा केवल सानो झिँगा फस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ । तसर्थ कसैले पनि कुल्चिन नसक्ने गरी फलामकै जाल बनाउन आवश्यक छ । युवा शक्तिलाई एकीकृत र संगठित गरेर मात्र फलामको जाल तयार गर्न सकिन्छ । यसको निर्माणको अभियानबाट विमुख हुने छुट बालेनलाई रहनेछैन ।
युवाशक्ति नै परिवर्तनको संवाहक हो । यस पटक मतपेटिकाका माध्यमबाट प्रकट भएको युवा भावना केवल दलहरूप्रतिको आक्रोश र उत्तेजना मात्र होइन, यो कसैको असफलताको उपज पनि होइन, न त पानीको फोका नै । यो त मुलुकको अनिवार्य आवश्यकता हो, युवा भविष्य र मुलुकको मुहार फेर्ने महत्त्वपूर्ण मौलिक अवसर पनि हो । निकट भविष्यमा हुन लागेको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा पनि युवाशक्तिलाई सक्रिय गराइराख्न हजारौंहजार बालेनहरू अग्रसर हुनु उत्तिकै आवश्यक छ ।
प्रकाशित : जेष्ठ १३, २०७९ ०७:५१